Magdeburg hemispheres: àgwà na nnwale | Meteorology netwọkụ
Na May 8, 1654, n’obodo Magdeburg dị na Jamanị, Eze Ukwu Ferdinand nke Atọ na ndị òtù ya gosipụtara nnwale pụrụ iche nke onyeisi obodo ahụ, bụ́ ọkà mmụta sayensị German bụ́ von Glick mere ma mee. Ọtụtụ ihe osise sitere n'oge na-egosipụta ihe omume a. Ọ bụ maka magdeburg hemispheres. Nnwale ahụ bụ ịgbalị ikewapụ akụkụ igwe igwe abụọ dị ihe dị ka sentimita 50 na dayameta, jikọtara ya na kọntaktị dị mfe, iji mepụta oghere a kpuchiri ekpuchi, na mberede, jiri mgbapụta na-ekpo ọkụ nke aka ya mepụta ikuku si n'akụkụ ahụ pụta. Iji mee ka a na-emechi akara nke igwe ma ọ bụ hemispheres, a na-etinye mgbanaka akpụkpọ anụ n'etiti ebe kọntaktị. Ebe nke ọ bụla nwere loop dị iche iche nke enwere ike isi na ya gafere eriri ma ọ bụ yinye ka e wee dọpụta ya n'akụkụ nke ọzọ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nnwale hemispheres Magdeburg na mkpa ọ dị.
3 Gịnị mere o ji sie ike ikewa ndị hemispheres nke Magdeburg
4 Nkọwa nke nnwale
Ọ bụ ngwaọrụ emebere iji gosipụta ịdị adị nke oghere na nrụgide ikuku. Ọ nwere oghere abụọ dị oghere, ma ọ bụrụ na ha jikọtara ibe ha na ikuku dị n'ime na-adọta. a ga-emepụta oghere ime. N'okpuru ọnọdụ ndị a, ikuku na-eme ka nrụgide dị n'elu elu, na-eme ka ọ sie ike ikewapụ ihe mkpofu. N'ezie, ndị a kwesịrị ịdị ike nke ukwuu, n'ihi na ozugbo a chụpụrụ n'ime ime ahụ, ọ ga-enwe ike ịgbawa ha na nrụgide ikuku.
Hemispheres ndị a, aha ya bụ obodo German nke Magdeburg, e ji ha mee nnwale pụrụ iche na 1654. Otto von Guericke, onye isi obodo obodo na ọkachamara physicist, n'ihu onye nhoputa ndi ochichi Frederick William nke Brandenburg na ndị otu nzuko omeiwu Regensburg, na-eme ihe na-ekpo ọkụ n'elu igwe abụọ.
N'ịgbalị ikewapụ ha. kekọta otu mbara ala n'otu ìgwè ịnyịnya na nke ọzọ na ọnụ ọgụgụ ha nhata nke ịnyịnya, ma na-abụghị ntụziaka. Mgbe ọtụtụ mgbalị gasịrị na ihe ijuanya nke ndị bịaranụ, ọ gaghị ekwe omume ikewa akụkụ abụọ nke oghere ahụ. Mmetụta dị ka ihe anyị na-enweta mgbe anyị na-etinye plunger abụọ drain na ala ma pịa ha megide ibe ha. Oghere ezughị ezu, mana ọ na-ewe ike ikewapụ ha.
Ọ tụrụ ndị na-ekiri anya ịhụ ka otu ụmụ nwoke dị iche iche ji ike ha niile na-adọkpụ n'akụkụ ma ghara ikewapụ mbara ala. A pụghịkwa iji ịnyịnya iri na isii kewapụ ha na mbụ, kewara ha ụzọ abụọ nke ịnyịnya asatọ. Mgbe ịrụsi ọrụ ike, ha mezuru ebumnobi ha wee kpasuo oke iwe. Hemispheres nke mebere oghere, nke chọrọ mgbalị siri ike imeghe, nwere ike kewapụ ya n'enweghị mgbalị ọ bụla site n'ikwe ka ikuku banyeghachi n'ime ime oghere ahụ.
Na nnwale 2005 na ịnyịnya iri na isii na Granada, enweghị ike ikewa hemispheres. Buru n'uche na oghere nke nfuli Von Guericke nwetara na narị afọ nke XNUMX dị ala karịa nke mgbapụta mgbapụta ọgbara ọhụrụ anyị nwetara.
Gịnị mere o ji sie ike ikewa ndị hemispheres nke Magdeburg
Akụkụ mbụ nke ajụjụ a, n'oge a, dị mfe maka ụmụ akwụkwọ sekọndrị ọ bụla nwere ezi nghọta nke physics ịza. Ihe niile dị n'elu ụwa dị n'oké osimiri nke ikuku dị arọ, na-adabere na ike nkịtị na elu ya n'akụkụ niile. N'otu aka ahụ, a na-anabata ya site na mbara igwe, n'ime ma n'èzí n'ime. Ọ bụrụ na a na-emechi oghere ahụ ka ọ bụrụ oghere, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikuku niile dị n'ime na-ewepụ ma ike dị n'elu elu na-agbanye ha karịa ikuku na-eme n'èzí, na-eme ka ọ na-esiri ha ike ikewapụ.
Ike ụgbụ ahụ nke na-amanye akụkụ abụọ ahụ, kesara n'okirikiri a kpụrụ, ya bụ, na-eche na oghere a na-enweta n'ime bụ ihe dịka 10% nke ikuku dị n'èzí, ga-emeri ike nke na-ekewa ha, ọ bụ n'usoro nke tọn asaa.
Akụkụ nke abụọ nke ajụjụ a, gịnị mere ndị bi na Magdeburg ji masị ya? Ọ metụtara ihe ọmụma nke mmiri mmiri na omume ha ka oge na-aga. Anyị nọ na narị afọ nke XNUMX, na akụkụ dị mkpa nke ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na ọ gaghị ekwe omume ịmepụta oghere, "egwu egwu", nke bụ ihe kpatara mmegharị nke mmiri mmiri, na-egbochi ya ime.
Ya mere, site n'itinye mmiri mmiri si na iko ahụ site na ahịhịa, si otú ahụ wepụ ụfọdụ ikuku dị n'ime ya, egwu nke ọdịdị na-enwe mgbe ọ tọgbọ chakoo na-eme ka mmiri na-ebili. N'oge akụkọ ihe mere eme nke na-eduzi nnwale, ndị ọkà mmụta sayensị dị ka Torricelli hapụrụ echiche a ma gosi na nrụgide nke ikuku na-akpata, ịdị arọ nke ikuku, ọ bụghị egwu nke oghere.
Nkọwa nke nnwale
Iji ghọta ihe Eze Ukwu Ferdinand nke Atọ gbara akaebe, anyị aghaghị icheta na ndụ anyị na-ewere ọnọdụ n'oké osimiri nke ikuku, na nke a, dị ka mmiri ọ bụla, nwere oke, ya mere, ikuku e nyere nwere ike dị arọ nke nwere ike ime ya. ọ. Ma ndị agha ndị a na-eme ihe karịrị ka ikpo brik ndị e tinyere n’isi anyị. Ihe dị ntakịrị mgbagwoju anya n'ihi na ihe ọ bụla mikpuru n'oké osimiri nke ikuku a na-edo onwe ya n'okpuru ike nke na-achọ ka mpịakọta ya, na-eme ihe n'ebe ọ bụla n'elu ya. Ọzọkwa, a na-eji ike ndị a eme ihe mgbe niile n'akụkụ elu nke ajụjụ.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na a na-agbanye ikuku n'ime akpa, mgbidi nke akpa ahụ ga-enwe ike dị n'elu ya n'oge ọ bụla, na-eme ka ọ gbasaa. Iji ghọta ihe omume a n'ụzọ zuru ezu, anyị ga-echeta na ikuku bụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụmụ irighiri ihe. nke ị nwere ike iche n'echiche dị ka oghere microscopic na-agagharị na-enweghị usoro n'akụkụ niile, na-akụda ma na-agbapụ ihe niile n'ụzọ ya. Nke ọ bụla n'ime obere nkukota ndị a na-emepụta obere ike nke, jikọtara ya na ọtụtụ hits nke na-eme na-adịghị akwụsị kwa sekọnd, nwere ike ịmepụta ntakịrị ike. Mmetụta net nke mmetụta molekụla a na-adị mgbe niile bụ otu ndị agha nke na-adị mgbe niile na elu mmetụta.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere hemispheres Magdeburg na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Magdeburg Hemispheres